RASMI: Taariikhda Iyo Waqtiga La Ciyaari Doono Kulanka El Clasico Ee Real Madrid vs Barcelona Oo La Shaaciyey - Gool24.Net
Maamulka horyaalka kubadda cagta Spain ayaa shaaciyey xilliga la ciyaari doono kulanka labaad ee El Clasico ee kooxaha Real Madrid iyo Barcelona oo ka dhici doona garoonka Estadio Santiago Bernabeu ee magaalada Madrid.
Kulankii hore ee labada kooxood oo muddo dib loo dhigay kaddib rabshado iyo degenaansho la’aan siyaasadeed oo ka taagnaa gobolka Catalonia ayaa la ciyaaray December 18, waxaanay ku kala baxeen barbarro.
Kulanka labaad ee horyaalka LaLiga ee El Clasico waxay Real Madrid iyo Barcelona isku haleeli doonaan hoyga Los Blancos ee Santiago Bernabeu maalin Axad ah oo ay taariikhdu tahay March 1, 2020, marka ay saacadda CET tahay 9ka fiidnimo.
Marka ay labada kooxood ku kala baxaan ciyaartan, waxay isla toddobaadkaas la kala ciyaari doonaan Manchester City iyo Napoli oo ay lugta labaad ee wareegga 16-ka Champions League ciyaari doonaan.
Barcelona waxay Salaasada usbuucaas u safri doontaa waddanka Talyaaniga oo ay kula soo ciyaari doonto Napoli, halka Real Madrid ay isla garoonka Santiago Bernabeu ku martigelin doonto Manchester City Arbacada toddobaadkaas.
Madaxweynaha horyaalka LaLiga, Javier Tebas ayaa sheegay in taariikhdan iyo waqtigan a y u ogolaan doonaan in ciyaarta laga baahiyo telefishanka LaLigaTV oo ay dadka reer UK si toos ah uga daawan doonaan, taas oo meesha ka saari doonta marar badan oo aan Boqortooyada Britain laga daawanin ciyaartan sababo la xidhiidha jadwalka baahinta telefishanada.